/blog/Gallery/Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo Ee Ku Saabsan Sunitinib Malate 丨 AASraw
Posted on 06 / 09 / 2021 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Sunitinib Malate Dulmarka
Maxaan U Adeegsan Karnaa Sunitinib Malate?
Sidee ayuu u shaqeeyaa Sunitinib Malate?
Sidee loo Qaadaa Maatinka Sunitinib?
Sidee loo keydiyaa Sunitinib Malate?
Imisa Ayaan Ognahay Waxyeelada Uu Leeyahay Sunitinib Malate?
Waa Maxay Dawooyin Kale Oo Saameyn Ku yeelan doona Sunitinib Malate?
FDA waxay ansaxisay Sunitinib Malate oo ah Daaweyn Adjuvant oo ah Kansarka Kelyaha Renal
Xagee Ka Iibsan Karaa Sunitinib Malate Online?
Sunitinib Malate (CAS:341031-54-7) waxaa laga helay SUGEN, oo ah shirkad bayoolajiyeed oo hormood ka ah ka hortagayaasha protein kinase. Waxay ahayd tii saddexaad ee taxane taxane ah oo ay ku jiraan SU5416 iyo SU6668. Fikraddu waxay ahayd mid ATP ah oo la tartamaysa ATP si loogu xidho aagga catalytic ee qabtayaasha tyrosine kinases. Fikraddani waxay horseedday ikhtiraacida qaar badan oo ka mid ah maaddooyinka yar-yar ee tyrosine kinase, oo ay ka mid yihiin Gleevec, Sutent, Tarceva iyo kuwo kale oo badan.
Sunitinib Malate waa budada huruud ama oranji ah. Sunitinib Malate waa meco-yar yar oo badan oo la bartilmaameedsaday daawada tyrosine kinase (RTK) horjoogsade Markay ahayd Janaayo 26, 2006, wakiilka waxaa si rasmi ah u ansixiyay US FDA tilmaamayaasha lagu daaweynayo kansarka unugyada kelyaha (RCC) iyo buro-mareenka caloosha iyo caloosha ku dhaca ee u adkeysanaya imatinib (GIST). Ujeeddooyinkaas awgeed, Sunitinib Malate guud ahaan waxaa loo heli karaa iyada oo ah sameynta afka laga maamulo. Sunitinib Malate wuxuu joojiyaa calaamadaha gacanta isagoo bartilmaameedsanaya waxyaabo badan oo RTK ah. Kuwaas waxaa ka mid ah dhammaan qaboojiyeyaasha cuncunka laga soosaaray platelet-ka (PDGF-R) iyo qaboojiyeyaasha kororka cuncunka xididdada dhiigga (VEGF-R). Sunitinib Malate sidoo kale wuxuu xakameynayaa KIT (CD117), RTK oo kaxeeya inta badan GISTs. Intaa waxaa dheer, Sunitinib Malate wuxuu xakameynayaa RTK-yada kale oo ay ku jiraan RET, CSF-1R, iyo flt3.
Sunitinib Malate waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dadka qaangaarka ah ee qaba kansarka kilyaha oo aan faafin (maxali ah) oo qatar ugu jira in RCC ay dib u soo noqoto mar kale qalliinka kilyaha kadib.
Sunitinib Malate waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo kansarka kalyaha ee horumarsan (kansarka kelyaha ee horumarsan ama RCC).
Sunitinib Malate waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo kansar dhif ah oo caloosha, mindhicirka, ama hunguriga loo yaqaan buro caloosha ku dhacda (GIST) iyo markii aad qaadatay daawada imatinib mesylate oo aysan ka hor istaagin kansarka inuu sii kordho ama ma qaadan kartid imatinib mesylate. Gleevec waa summad ka diiwaangashan shirkadda 'Novartis Pharmaceuticals Corporation'.
Sunitinib Malate waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo nooc ka mid ah kansarka ganaca ee loo yaqaan burooyinka ganaca neuroendocrine (pNET) oo horumar sameeyay oo aan lagu daweyn karin qalliin.
Sunitinib Malate waa xakamey-yar-yar oo xakameynaya xinjirooyinka badan ee tyrosine kinases, qaar ka mid ah kuwaas oo ku lug leh koritaanka burooyinka, pathologic angiogenesis, iyo horumarka metastatic ee kansarka. Wakiilka wuxuu horjoogsadaa soo-dhoweeyeyaasha cunsuriyada ee laga soosaaray unugyada platelet-ka (PDGFRα iyo PDGFR recep), soosaarayaasha soosaarayaasha koritaanka cuncunka xididdada xididdada (VEGFR1, VEGFR2, iyo VEGFR3), soo-dhoweynta unugyada unugyada jirka (KIT), FMS-like tyrosine kinase 3, nooca 1, iyo glial cell-line-ka laga helo soo-saaraha neurotrophic factor (RET). Xakamaynta Sunitinib Malate ee waxqabadka iyo shaqeynta kuwan soo dhaweynta tyrosine kinases ayaa lagu muujiyey baaritaanka bayoolaji iyo unugyada iyo tijaabooyinka kordhinta unugyada. Dheef-shiid kiimikaadka asaasiga ah ee Sunitinib Malate wuxuu soo bandhigayaa awood la mid ah isku-dhafka waalidka ee baaritaanka kiimikada iyo unugyada.
Sunitinib Malate wuxuu joojiyaa fosforyaalka badan ee daawadayaasha tyrosine kinases (PDGFRβ, VEGFR2, KIT) ee burooyinka xenografts oo muujinaya bartilmaameedyada soo-dhoweynta tyrosine kinase ee vivo waxayna xakameysaa koritaanka burooyinka iyo metastasis ee moodooyinka tijaabada qaarkood. Wakiilka ayaa hor istaagaya koritaanka unugyada burooyinka oo muujinaya bartilmaameedka daaweysan ee loo yaqaan 'tyrosine kinases' (PDGFR, RET, ama KIT) in vitro iyo PDGFRβ-iyo VEGFR2 ku tiirsan buro angiogenesis in vivo.
Qiyaasta Sunitinib Malate ee dhakhtarkaagu kuu qoro waxay ku xirnaan doontaa dhowr arrimood. Kuwaas waxaa ka mid ah:
Nooca iyo darnaanta xaalada aad u isticmaaleyso Sunitinib Malate si aad u daweyso
Conditions xaalado caafimaad oo kale oo laga yaabo inaad qabtid
Medications dawooyinka kale ee aad qaadanaysid
Dhakhtarkaaga ayaa ugu dambayn kuu qori doona qiyaasta ugu yar ee bixisa waxtarka la doonayo.
Macluumaadka soo socdaa wuxuu sharaxayaa qiyaasaha sida caadiga ah loo isticmaalo ama loogu taliyo. Si kastaba ha noqotee, hubso inaad qaadato qiyaasta dhakhtarkaagu kuu qoray. Dhakhtarkaaga ayaa go'aamin doona qiyaasta ugu fiican ee ku habboon baahiyahaaga.
Forms Noocyada daroogada iyo xooggooda
Sunitinib Malate wuxuu u yimaadaa kaabsol aad liqdo. Waxaa laga heli karaa awooddan: 12.5 milligram (mg), 25 mg, 37.5 mg, iyo 50 mg.
Qiyaasta kansarka caloosha iyo mindhicirka
Qiyaasta caadiga ah ee Sunitinib Malate ee burooyinka caloosha ku dhaca (GISTs) waa 50 mg hal mar maalintii 4 todobaad. Tan waxaa ku xigta 2 toddobaad daawo la'aan. Kadib, waxaad ku celin doontaa wareegga.
Waxay u badan tahay inaad sii wadi doonto qaadashada Sunitinib Malate illaa inta kansarkaagu ka sii darayo ama jirkaagu u dulqaadan karin daaweynta daroogada. Dhakhtarkaaga ayaa go'aamin doona goorta aad joojinayso qaadashada Sunitinib Malate. Faahfaahin ku saabsan sida Sunitinib Malate loogu isticmaalo daaweynta GISTs, ka eeg xiriirka hoose.
Qiyaasta kansarka kilyaha
Sunitinib Malate sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo nooc ka mid ah kansarka kilyaha oo loo yaqaan 'renal cell carcinoma (RCC)'. Qiyaasta caadiga ah ee Sunitinib Malate ee loogu talagalay RCC horumarsan waa 50 mg hal mar maalintii 4 usbuuc. Tan waxaa ku xigta 2 toddobaad daawo la'aan. Kadib, waxaad ku celin doontaa wareegga.
Waxay u badan tahay inaad sii wadi doonto qaadashada Sunitinib Malate illaa inta kansarkaagu ka sii darayo ama jirkaagu u dulqaadan karin daaweynta daroogada. Dhakhtarkaaga ayaa go'aamin doona goorta aad joojinayso qaadashada Sunitinib Malate. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan sida Sunitinib Malate loogu isticmaalo daaweynta RCC-da horumarsan, ka eeg xiriirka hoose.
Qiyaasta daawada ku habboon ee kansarka kalyaha
Sunitinib Malate sidoo kale waxaa loo isticmaalaa sidii daaweyn lagu daweeyo nooc ka mid ah kansarka kilyaha oo loo yaqaan RCC ka dib nephrectomy (qalliinka ka saarida kilyaha). Caadiga ah qiyaasta Sunitinib Malate isticmaalkani waa 50 mg hal mar maalintii 4 usbuuc. Tan waxaa ku xigta 2 toddobaad daawo la'aan. Waxaad caadi ahaan ku celin doontaa wareeggan illaa sagaal jeer. Faahfaahinta ku saabsan sida Sunitinib Malate loogu isticmaalo daaweyn ku-meelgaar ah ee loogu talagalay RCC, ka eeg xiriirka hoose.
Qiyaasta kansarka ganaca
Qiyaasta caadiga ah ee Sunitinib Malate ee burooyinka qanjidhada 'neuroendocrine pancreatic' ee horumarsan (pNETs) waa 37.5 mg hal mar maalintii.
Waxay u badan tahay inaad sii wadi doonto qaadashada Sunitinib Malate illaa inta kansarkaagu ka sii darayo ama jirkaagu u dulqaadan karin daaweynta daroogada. Dhakhtarkaaga ayaa go'aamin doona goorta aad joojinayso qaadashada Sunitinib Malate.
Ogaysiis: qiyaasta waxay ahayd tixraac keliya, fadlan ka caawi inaad ka hubiso faahfaahin dheeraad ah boggan:www.fda.gov .
AASraw waa soo saaraha xirfadlaha ah ee Sunitinib Malate.
Daawooyinka aan loo baahnayn waa in lagu tuuraa siyaabo gaar ah si loo hubiyo in xayawaanka, carruurta, iyo dadka kaleba aysan cuni karin. Si kastaba ha noqotee, waa inaadan ku daadinin daawadan musqusha hoosteeda. Taabadalkeed, sida ugufiican ee dawada looga takhalusi karaa waa iyada oo loo maro barnaamijka dib u celinta daawada. La hadal farmashiistahaaga ama la xiriir waaxda qashinka / dib u warshadaynta si aad wax uga ogaato barnaamijyada dib-u-celinta ee bulshadaada. Eeg Kaydinta Ammaan ee FDA ee Degelka dawooyinka wixii macluumaad dheeraad ah haddii aadan marin u lahayn barnaamijka dib-u-celinta.
Dhacdooyinka xun ee Sunitinib Malate waxaa loo tixgeliyaa xoogaa la maareyn karo iyo dhacdooyinka dhacdooyinka halista ah ee daran ayaa hooseeya.
Dhacdooyinka ugu caansan ee la xariira daaweynta Sunitinib Malate waa daal, shuban, lallabbo, anorexia, dhiig kar, maqaarka oo midab jaalle noqda, falcelinta maqaarka lugta, iyo stomatitis. Daraasada Wejiga III ee GIST ee gacanta lagu hayo, dhacdooyinka xun ee dhacay inta badan Sunitinib Malate marka loo eego placebo waxaa ka mid ah shuban, cunno-xanuun, maqaarka oo midab noqda, xuubka / stomatitis, asthenia, dhadhanka la beddelay, iyo calool istaagga. Qiyaasta dhimista ayaa loo baahday 50% bukaanada wax ku bartay RCC si loo maareeyo sunta muhiimka ah ee wakiilkan.
Dhacdooyinka halista ah (darajada 3 ama 4) dhacdooyinka qallafsan waxay ku dhacaan of10% bukaannada waxaana ka mid ah dhiig-kar, daal, asthenia, shuban, iyo daaweynta kiimikada ee loo yaqaan 'acral erythema'. Cilladaha aan caadiga ahayn ee shaybaarka ee laxiriira daaweynta Sunitinib Malate waxaa kamid ah lipase, amylase, neutrophils, lymphocytes, iyo platelet. Hypothyroidism iyo erythrocytosis dib loo celin karo ayaa sidoo kale lala xiriiriyay Sunitinib Malate. Inta badan dhacdooyinka xun waxaa lagu maareyn karaa iyada oo loo marayo daryeel taageero ah, kala goynta qiyaasta, ama yareynta qiyaasta
Daraasad dhowaan lagu sameeyay Xarunta Kansarka ee MD Anderson ayaa isbarbar dhigtay natiijooyinka bukaanada kansarka unugyada kalyaha ee qaata kuwaas oo helay Sunitinib Malate jadwalka caadiga ah (50 mg / 4 toddobaadyo ah 2 todobaad oo fasax ah) kuwa helay Sunitinib Malate oo leh fasaxyo daawooyin badan oo gaagaaban iyo kuwa gaagaabanba. (jadwalka kale) Waxaa la arkay in badbaadada guud, badbaadada horumarka bilaashka ah iyo u hogaansanaanta daroogada ay si aad ah uga sarreeyaan bukaannada helay Sunitinib Malate jadwalka kale. Bukaanku sidoo kale waxay lahaayeen dulqaad wanaagsan iyo darnaanta hoose ee dhacdooyinka xun ee badanaa u horseeda joojinta daaweynta bukaanka kansarka unugyada kelyaha.
Sunitinib Malate wuxuu sababi karaa dhibaato wadne oo halis ah. Khatartaadu way sii badnaan kartaa haddii aad sidoo kale u isticmaasho daawooyinka kale qaarkood infekshinnada, neefta, dhibaatooyinka wadnaha, dhiig karka, niyadjabka, cudurka maskaxda, kansarka, duumada, ama HIV.
Mararka qaar amaan maahan in la isticmaalo daawooyinka qaarkood isla waqtigaas. Daawooyinka qaarkood waxay saameyn ku yeelan karaan heerarka dhiiggaaga ee daroogooyinka kale ee aad qaadato, taasoo laga yaabo inay kordhiso waxyeellooyinka ama daawooyinka ka dhigto kuwo aan waxtar lahayn. U sheeg dhakhtarkaaga dhammaan daawooyinkaaga kale, gaar ahaan: daawada lafo-beelka.
Liiskani ma dhammaystirna. Daawooyinka kale waxay saameyn ku yeelan karaan Sunitinib Malate, oo ay ku jiraan dawooyinka dhakhtarku qoro iyo kuwa la iska iibsado, fiitamiinada, iyo wax soo saarka dhirta. Dhammaan isdhexgalka daroogada ee suurtagalka ah kuma qorna halkan.
Bishii Nofeembar 16, 2017, Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ayaa ansixiyay Sunitinib Malate (Sunitinib Malate, Pfizer Inc.) daaweynta adjuvant ee bukaanka qaangaarka ah ee halista sare ugu jira carcinoma unugyada kelyaha ee soo noqnoqda kadib nephrectomy.
Ansixinta waxay ku saleysneyd xarun badan, caalami, laba-indhoole, xakamaynta ciribtirka, tijaabada (S-TRAC), bukaanada 615 ee halista sare ugu jira RCC soo noqnoqda kadib nephrectomy. Bukaannada waxaa loo kala saaray 1: 1 si ay u helaan midkood 50 mg Sunitinib Malate hal mar maalintii, 4 toddobaad oo daaweyn ah oo ay ku xigto 2 toddobaadyo fasax ah, ama placebo. Badbaadinta cudurka aan lahayn ee Mediya ee bukaanka qaata Sunitinib Malate wuxuu ahaa 6.8 sano (95% CI: 5.8, lama gaarin) marka loo barbardhigo 5.6 sano (95% CI: 3.8, 6.6) bukaanada qaata placebo (HR = 0.76; 95% CI: 0.59 , 0.98; p = 0.03). Waqtiga falanqaynta DFS, guud ahaan xogta badbaadada may bislaan.
Dareen-celinta xun ee ugu badan (≥25%) ee Sunitinib Malate waa daal / asthenia, shuban, xuub-barar / stomatitis, lallabbo, rabitaanka cuntada oo yaraada / anorexia, matag, calool xanuun, cudud gacanta, dhiig-kar, dhacdooyin dhiig-bax ah, dysgeusia / dhadhan la beddelay , dyspepsia, iyo thrombocytopenia. Calaamadeynta waxaa ku jira digniin sanduuq leh si looga digo xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka iyo bukaanada halista cudurka cagaarshowga, taas oo laga yaabo inay keento beerka oo shaqeynaya ama geeri.
Qiyaasta lagu taliyey ee Sunitinib Malate ee daawada loo yaqaan 'adjuvant treatment of RCC' waa 50 mg oo afka ah hal mar maalintii, iyada oo aan la cunin ama aan la cunin, 4 toddobaad oo daaweyn ah oo ay ku xigto 2 toddobaad oo fasax ah sagaal toddobaad oo wareeg ah 6.
Xusuus: Macluumaad daawo oo buuxa ah ayaa laga heli karaa:accessdata.fda.gov PDF.
Waxaa jira alaab-qeybiyeyaal / soo saarayaal badan oo Sunitinib Malate ah oo suuqa ku jira, helitaanka midka dhabta ah waa mid aad muhiim ugu ah dhammaan dadka u baahan badeecadan si deg deg ah. Markii aan go'aansanayno inaan ka iibsano budada Sunitinib Malate budada suuqa, waxaan u baahanahay inaan waxbadan ka baranno, ogaanno sida loo isticmaalo iyo habka wax u qabashada, wixii khatar ah markaan qaadano budada Sunitinib Malate…. Intaas waxaa sii dheer, qiimaha iyo tayada waa inay ahaadaan waxyaabaha aan ka walwalsanahay ka hor intaanan iibsan.
Ka dib markii aan ka baarnay xog uruurinta suuqa, marka la barbardhigo alaab-qeybiyeyaal badan, AASraw waxay u muuqataa xulasho wanaagsan dadka doonaya inay waxbadan iibsadaan Budada Sunitinib Malate, waxsoosaarkooda si adag ayaa loo xakameeyay iyadoo loo marayo xaalada cGMP, tayada waa lala socon karaa waqti kasta waxaana laga yaabaa inay bixiyaan dhammaan warbixinnada baaritaanka markaad dalbato. Marka laga hadlayo qiimaha / budada budada Sunitinib Malate, waa inay macquul ahaataa, indhahayga. Sababtoo ah waxaan ka helay qiimo badan shirkado kala duwan oo loo yaqaan 'Sunitinib Malate', marka la barbardhigo tayada, waxaan u maleynayaa in aasraw uusan noqon doonin doorasho xun.
 Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka. Sunitinib (Sutent) Qorista macluumaadka. 2015.
 CA Naranjo, U. Busto, iyo EM Iibiyeyaasha, "Habka lagu qiyaasayo suurtagalnimada falcelinta daroogada xun," Clinical Pharmacology iyo Therapeutics, vol. 30, maya. 2, bogga 239 - 245, 1981.
 Z. Ansari iyo MK George, "thrombocytopenia-ku-daroogada-daroogada ku-daroogada ah ee loo yaqaan 'sunitinib' ee bukaanka qaba kansarka kelyaha ee metastatic: warbixinta kiis," Joornaalka Warbixinta Kiiska Caafimaadka, vol. 7, maqaalka 54, 2013.
 K. Sakai, K. Komai, D. Yanase, iyo M. Yamada, "Plasma VEGF oo calaamad u ah ogaanshaha iyo daaweynta cudurka neuropathy vasculitic," Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, vol. 76, maya. 2, maqaalka 296, 2005.
 Wakaalada Daawooyinka Yurub. Sunitinib (SUTENT). Soo-koobidda Astaamaha Wax soo saarka. 2015.
 Pajares B, Torres E, Trigo JM et al. Ka hortagayaasha Tyrosine kinase iyo isdhexgalka daroogada: dib u eegis lagu sameeyo talooyinka wax ku oolka ah. Clin Transl Oncol 2012; 14: 94-101.
 Teo YL, Ho HK, Chan A. Dheef-shiid kiimikaadka daroogada-daroogada ee la xiriira is-dhexgalka daawooyinka ee daawada 'tyrosine kinase inhibitors': fahamka hadda jira, caqabadaha iyo talooyinka. Br J Clin Pharmacol 2015; 79: 241-253.
 Jamie Dlugosch (2009-03-13). "Biologics iyo Sutent ma badbaadin doonaan Pfizer?". InvestorPlace.
 BMJ 31-Jan-2009 "NICE iyo caqabada dawooyinka kansarka" p271
 Blay JY, Reichardt P (Juun 2009). "Burooyinka caloosha ee caloosha ku jira ee horumarsan ee Yurub: dib u eegis lagu sameeyay talooyinka daaweynta ee la cusbooneysiiyay". Khabiirka Rev Anticancer Ther. 9 (6): 831-8. doi: 10.1586 / era.09.34. PMID 19496720. S2CID 23601578.
Sheekooyinka Guusha Cabozantinib ee Daaweynta Caner
Waa Maxay Dawooyinka Ugu Waxtarka Badan Ee Lagu Daweeyo Kansarka Naasaha? 7 daroog ee ugu sareeya ee lagu daweeyo kansarka sanbabka - oo ay ansaxisay FDA